Radama Voalohany - Wikipedia
Radama Voalohany na Radama I dia mpanjaka malagasy najaka tao amin'ny Fanjakana Merina nanomboka tamin'ny 1810 hatramin'ny taona 1828. Zanak'Andrianampoinimerina izy ary nataony mpandova fanjakana fa tsy Ramavolahy zokiny. Tamin'ny androny no nidiran'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara nentin'ny misionera protestanta britanika sady nanombohan'ny fanoratana ny teny malagasy amin'ny abidy latina izay notsorina ka lasa abidy malagasy.
Teraka tamin'ny 1793 tamin'ny anarana Ilaidama na Laidama ary maty ny 27 Jolay 1828 tamin'ny faha-36 taonany. Nanambady an-dRamavo izy nefa tsy nana-janaka ka Ramavo izay lasa Ranavalona I no nandimby azy rehefa maty izy.
Valo ambin'ny folo taona Ilaidama raha nandimby an' Andrianampoinimerina tamin' ny taona 1810, ary Radama I no anarana nentiny. Taorian'ny nahafatesan'ny rainy tamin'ny 1810 dia lasa nanafika ny Bezanozano sy ny Sihanaka ary ny tanin'andriana betsileo izay nihevitra fa afaka nanararaotra ny tsifananany traikefa amin'ny politika Radama. Nahomby ny fanafihana. Voaporofo araka ny fahombiazany ny herin' Imerina ary ny fanatanterahana ny sitra-pon'ny rainy ("Ny ranomasina no valamparihiko") sisa no zavatra hatao mba hahafahany mifandray amin'ny firenena eoropeana. Ny Fanjakana Mitambatra no voalohany manohana azy.
Izy no neken'ny governemanta britanika ho mpanjakan'i Madagasikara. Namarana fifanekena i Radama tamin'ny 1817 niaraka tamin'ny governoran'i Britanika ao Maorisy mba hanafoanana ny fivarotana andevo mendri-kaja ho an'ny miaramila britanika sy ny fanampiana ara-bola. Nanomboka tonga tamin'ny tona 1818 ny misionera anglisy avy amin'ny London Missionary Society; anisan'ireo olona ireo i James Cameron, David Jones ary David Griffirths izay nanangana sekoly, nametraka ny fanoratana teny malagasy tamin'ny alalan'ny abidy latina ary nandika ny baiboly, ary koa nampiditra karazana teknôlôjia vaovao teto amin'ny nosy Madagasikara.
Nandritra ny taonjato faha-19 dia nisy fifandrafiana teo amin'ny fitondrana frantsay sy ny mpitondra anglisy tao amin'ny nosy Maorisy izay nihevitra an'i Madagasikara ho eo ambany fifehezany. Voasolon'ny Angletera noho izany ny toerana notazonin'i Frantsa tao Madagasikara, ary afaka nifandray ara-pihavanana sy ara-diplomatika tamin-dRadama I izy ireo. Ny fanjakan'i Radama I, noho izany, dia voamariky ny fananan'ny Anglisy fahefana tanteraka.
Nandritra ny fiandrianany no nanitaran'i Radama ny fanjakany hatrany Toamasina, Mahajanga ary Taolagnaro. Nofoanany ny fanandevozana, natsangany ny tafika, ny fitsarana ambony sy ny mpitsara fara-tampony. Nofoanany koa ny fanamelohana ho faty, fa nosoloiny ny fonja. Natsangany ny sekoly, ny fanotam-boky, ary ny tenany mihitsy no manara-maso akaiky ny taozava-baventy sasantsasany.
Nomeny fahalalahana hisafidy ny finoany ny vahoakany na dia somary tsy niraika firy tamin'ny fivavahana aza izy. Tamin'izany no nahazo vahana ny "fitoriana ny tenin'Andriamanitra" nataon'ny Protestanta.
Ny 27 jolay 1828 izy no niamboho, tamin'ny faha-enina ambin'ny telopolo taonany ; ny zava-pisotro mahamamo no nanimba ny fahasalamany. Ramatoa vadiny, Ramavo, no nandimby azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Radama_Voalohany&oldid=1002446"
Dernière modification le 10 Martsa 2021, à 10:31
Voaova farany tamin'ny 10 Martsa 2021 amin'ny 10:31 ity pejy ity.